I-China Pueraria lobata ikhupha amanzi anyibilikayo puerarin 10% mveliso kunye nabathengisi | I-Shaanxi Green Bio-Injineli
Kwicandelo lezithambiso, isiphumo se-phytoestrogen se-puerarin sinokuthomalalisa uphawu olubangelwa kukuhla kwenqanaba le-estrogen kunye nokuguga, njenge-mastoptosis, crinkle, ukwehla kobunzima besikhumba kunye ne-leukotrichia. Yiyo loo nto ihlala isetyenziswa ekrimu yamabele, ukhilimu wamehlo kunye nekhrimu yolusu.
I-1.Pueraria isetyenziselwa ukomeleza amajoni omzimba kunye nokuthintela iseli yomhlaza;
I-2 Pueraria inokusetyenziswa kokuthintela iziphumo kwi-nephritis, nephropathy kunye nokusilela kwezintso;
I-3Pueraria kunye nomsebenzi wokuqinisa amandla okucuthwa kwe-myocardial kunye nokukhusela iseli ye-myocardial;
I-4 i-Pueraria inayo esebenzayo yokukhusela ukukhubazeka kwe-erythrocyte, ukwandisa umsebenzi we-hematopoietic system.
1. Kwibala lokutya, i-puraria isoflavones inokusetyenziswa ekutyeni nakwimveliso yezempilo, ukunciphisa uxinzelelo lwegazi kunye namafutha egazi.
2. Kwicandelo lokuxuba amayeza, i-puraria isoflavones isetyenziswa ngokubanzi kwii-biopharmaceuticals kunye ne-API yeearhente zenkqubo yentliziyo e-China. Njengoluhlobo lwamayeza amaTshayina injio, i-puerarin sisiyobisi esiqhelekileyo sentliziyo kunye nesifo se-cerebrovascular.
3. Kwicandelo lezithambiso, isiphumo se-phytoestrogen se-puerarin sinokuthomalalisa uphawu olubangelwa kukuhla kwenqanaba le-estrogen kunye nokuguga, njenge-mastoptosis, crinkle, ukwehla kobungqongqo bolusu kunye ne-leukotrichia. Yiyo loo nto ihlala isetyenziswa ekrimu yamabele, ukhilimu wamehlo kunye nekhrimu yolusu.
4. Njengesiyobisi secrud kwiziyobisi ze-cardiovascular, sisetyenziswa ngokubanzi kwi-biopharmaceuticals;
5. Ngempembelelo eyodwa yokunciphisa i-lipid, isetyenziselwa ngokubanzi ukongezwa kukutya nakwimveliso yezempilo;
6. Ngempembelelo eyahlukileyo ye-phytoestrogen, isetyenziswa ngokubanzi kumabala ezinto zokuthambisa ukubuyisela emva ubuthathaka.
Umsebenzi weSilajit powder
Ilawula ilawula amanqanaba eswekile yegazi kwaye ibonise isenzo se-hypoglycemic.
Yonyusa ukubonakala kweembumba zeseli.
3.Ikhawulezisa iinkqubo zeprotein kunye ne-acid ye-acid metabolism.
Isebenza njenge-radical scavenger simahla kunye nomonakalo obuyela emva owenziwe zizinto eziyityhefu.
Kuyanceda ukuhambisa izondlo nzulu kwizicwili.
6.Ibuyisela ibhalansi ye-electrochemical kwaye ixhasa amajoni omzimba.
7.Khuthaza ukuhamba kwezimbiwa, ngakumbi i-calcium, i-phosphorus kunye ne-magnesium kwizihlunu zamathambo kunye namathambo.
Egqithileyo Ukukhutshwa kweSilajit